रूसको लागि आयरल्यान्डमा काम गर्ने उत्कृष्ट अवसर हो जुन युरोपको एक विकसित देशमा बजार अर्थव्यवस्थाको प्रकार र उच्च स्तरको जीवनस्तरको साथमा जाने। तथ्याङ्कको बावजुद 1 जनवरी, 2017 को बेरोजगारी 7.2 प्रतिशत पुगेको छ, आयरल्यान्डमा विदेशीहरूको लागि रिक्तरीहरू सधै उपलब्ध छन्, खासकर जब यो अत्यधिक योग्य विशेषज्ञहरुको लागी। यस लेखले आयरल्यान्डमा जागिर खोजको समस्याहरू, विदेशबाट कर्मचारीहरूका लागि वर्तमान आवश्यकताहरू, साथसाथै विशिष्ट खाली र वेतनहरू जाँच गर्दछ।
आयरल्याण्डमा काम कसरी गर्ने?
आज, आयरल्याण्ड को कार्यशैली विदेश बाट कुल विशेषज्ञहरु को लगभग 10 प्रतिशत छ। यहाँ मुख्य प्रश्न एक नियोक्ता खोज्ने हो जसले श्रम सम्झौतालाई अर्को देशको नागरिकको साथ औपचारिककरण गर्न सहमत गर्दछ (सबै पछि, प्राप्त गर्न यो पहिलो पटक जस्तो देखिन्छ)। . यसको अतिरिक्त, सफल कामको लागि, रुसीहरूलाई आयरल्यान्डमा कार्य अनुमति प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि स्थानीय सरकार एक तरिका वा अर्कोमा क्याड्रेहरू आकर्षित गर्न इच्छुक छ, आयरल्यान्डको अर्थतन्त्रको लागी अधिक मांग। यस प्रकार, आज देशमा काम गर्ने नौ प्रकारका अनुमतिहरू त्यहाँ काम गर्ने छन्। वैसे, तिनीहरूले अन्य देशहरुमा रोजगार प्रणाली संग महत्वपूर्ण मतभेद छन्, उदाहरणका लागि, यूकेमा। रिजोल्युशनमा आयरल्यान्डमा कार्य स्थानीय श्रम बजारमा अवस्थित अंतरहरू भरिएको उद्देश्य हो।
, с октября 2014 года некоторым образом изменились. ध्यान दिनुहोस् कि अङ्ग्रेजीमा कार्य र अध्ययन जस्ता कोटीहरू नियन्त्रण गर्ने नियमहरू अक्टोबर 2014 देखि केही तरिकाहरूमा परिवर्तन भएको छ। त्यसैले, कानूनमा संशोधनको परिचयको कारण, ग्रीन कार्ड प्रोग्राम समाप्त भएको थियो, साथसाथै वैध कार्य अनुमतिहरूको लागि शर्त परिवर्तन भयो।
यसरी, आज एक विकल्प सामान्य रिजोल्युसन हो। по данному разрешению уместна, когда соблюдены два основных условия. यस रिजोल्युसनमा आयरल्यान्डमा कार्य उपयुक्त छ जब दुई आधारभूत अवस्थाहरू भेटिन्छ। पहिलो, श्रम बजारमा टेस्ट पास गर्नु आवश्यक छ र आवश्यक छ। यो प्रक्रियाले के गर्नु पर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ? यो माप एक आर्थिक स्थान वा स्थानीय बासिन्दाहरूको नागरिकोंलाई निश्चित कार्यको दावी गर्दैन भनेर पुष्टि गर्न बराबर छ। यसकारण, रिक्तरीको बारेमा जानकारी कम्तीमा दुई हप्ता, साथै रोजगारी सम्बन्धी साइटहरू र तीन दिनको लागि स्थानीय समाचारपत्रहरूमा रोजगारी सेवामा राखिएको छ।
может быть актуальной для иностранца лишь тогда, когда его годовая заработная плата составляет не менее тридцати тысяч евро. दोस्रो, आयरल्यान्डमा काम मात्र विदेशीको लागि प्रासंगिक हुन सक्छ यदि उनको वार्षिक वेतन कम्तीमा मात्र तीस हजार यूरो हो। यो आवश्यक छ कि केहि मामलाहरुमा थोडा सानो रकम अनुमति दिइएको छ।
, которой сопутствуют особые (критические) навыки, не требует осуществления мероприятия по проверке на рынке труда. उत्तरी आयरल्यान्डमा काम गर्दछ , जुन विशेष (महत्त्वपूर्ण) क्षमताहरूसँग छ, श्रम गतिविधि जाँच गर्न गतिविधिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छैन। यसबाहेक, यस्तो अनुमति व्यवसायको सबै प्रकारका लागि उपलब्ध छ। यहाँ मुख्य अवस्था प्रति वर्ष कम्तिमा साढे हजार यूरोको वेतन स्तर हो। यो पूरै महत्त्वपूर्ण छ कि अत्यधिक मूल्यवान विशेषज्ञहरु को सम्बन्ध मा यो पट्टी प्रति वर्ष तीस हजार यूरो छोड्न सक्छ।
परिवारका सदस्यहरूको लागि अनुमति
возможна по предоставлению соответствующим государственным органам страны разрешения на осуществление трудовой деятельности для членов семьи. आयरल्यान्डमा काम परिवारको सदस्यहरूको लागि कामको अनुमतिपत्र को सम्बन्धित राज्य निकायहरू प्रदान गरेर सम्भव छ। यस अवस्थामा हामी दुल्हन, साझेदारहरू र व्यक्ति जो अङ्ग्रेजीमा आधिकारिक रूपमा कार्यरत एक विदेशीमा निर्भर भएका बारेमा कुरा गर्दैछौं। यो पूरै आवश्यक छ कि यस्तो अनुमतिले श्रम बजारमा परीक्षणको अनिवार्य पारित गर्दैन, जुन रूसी नागरिकको लागि धेरै उत्साहजनक छैन, किनभने यो प्रक्रिया यो सरल छ।
पुन: प्रक्रिया प्रक्रिया
प्रतिक्रियाको प्रक्रियामा आयरल्याण्डको व्यावसायिक कार्यको कार्यान्वयनको लागि अनुमति विदेशीहरूलाई अनुमति दिन्छ जुन पहिले देशमा कार्य अनुमति थियो, तर केही परिस्थितिले यसलाई गुमाएको छ, फेरि नौकरी पाउन। एक नियमको रूपमा, कामको दाहिने हानि विदेशीको दोषको कारण होइन।
माथि सूचीबद्ध भएकाहरूका अतिरिक्त, थप अनुमतिहरू आज पनि प्रासंगिक छन्। ध्यान दिनुहोस् कि उनीहरूलाई धेरै कम प्रयोग गरिन्छ र निम्न वस्तुहरू समावेश गर्दछ:
विदेशी विद्यार्थीहरूको इन्टर्नशिप।
विदेशी कम्पनीहरूको आयरिश शाखाहरूमा प्रबन्धकीय स्थितिमा कर्मचारीहरूको रोजगार।
खेलकुद र सांस्कृतिक घटनाहरूको रखरखावको लागि कार्य गतिविधिहरू।
शोधकर्ताहरु र वैज्ञानिकहरुको लागि आदानप्रदान कार्यक्रम को अनुसार रोजगार।
आयरल्याण्डमा विदेशी कम्पनीहरूले सेवाको प्रावधानसँग सम्बन्धित अस्थायी कार्य।
आयरल्याण्डमा कार्य: विकल्पहरू
सफलतापूर्वक रूसी संघको मूल निवासी को लागि आयरल्यान्डमा रिक्तता निर्धारण गर्न स्थानीय मजदुर बजारलाई सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ र उपाय साबर को लागी कार्य को खोजी गर्न को लागी आफ्नो संभावना को मूल्यांकन गर्न को लागी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि, सबै भन्दा पहिला, यो अंग्रेजीको स्वामित्व पर्याप्त उच्च स्तरमा चिन्ता गर्दछ, किनभने कुनै भाषा बिना, रूसीहरूको लागि आयरल्याण्डमा काम व्यावहारिक रूपमा पहुँच योग्य छ।
साथै, विदेशी विशेषज्ञको दक्षता, अनुभव र योग्यताको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो कुनै गोपनीय छैन कि रोजगारी को प्रक्रिया मा एक धेरै ठूलो युरोपियन नौकरी चाहने संग प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रश्नमा देशमा नौकरी खोज्ने प्रक्रियामा, सामान्य मूल्य सामान्यतया रिश्तेदार र साथीहरूको प्रतिक्रियामा जोडिएको छ जसले पहिले आयरलैंडमा जागिरको अनुभव गरेको छ। यसको अतिरिक्त, यस अवस्थामा यो उपयुक्त छ, व्यक्तिगत सञ्जालले स्थानीय निवासीहरूसँग।
कसलाई संग काम गर्ने?
आज सम्म आयरल्यान्डमा योग्य पेशेवरहरूको लागि न्यूनतम वेतन 8.65 यूरो प्रति घण्टा हो, र डबलिनको औसत वेतन 33,000 यूरो प्रति वर्ष हो। रूसमा आयको तुलनामा यो स्थिति धेरै अनुकूल छ। यस तथ्यको कारण युरोपमा लगभग सबै प्रमुख आईटी कम्पनीहरूको युरोपियन केन्द्रहरू छन्, कम्प्यूटर प्रविधि विशेषज्ञहरूले यस देशमा काम गर्ने अन्य विशेषताहरूको तुलना भन्दा बढी काम गर्ने सम्भव छन्।
वैसे, यस्तो गम्भीर स्थिति बिल्कुल सबै स्तरका मेडिकल कर्मचारीहरूमा लागू हुँदैन। किन? तथ्य यो हो कि एक डाक्टर अनुभव संग अंग्रेजी को एक सभ्य ज्ञान संग सजिलै संग र धेरै चाँडै आयरल्याण्ड मा नौकरी खोज गर्न सक्षम छ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि काम गर्नका लागि खाली खाली ठाउँहरू आयरल्याण्डका ठूला शहरहरूमा छन्, कर्क, लिमिक, ग्यालेवे, ड्रोड, वाटरफोर्ड र निश्चित रूपमा, देशको राजधानी - डबलिन। यो पूरै आवश्यक छ कि यी सबै शहरहरूमा त्यहाँ एक स्थानीय प्रेस हो, जुन रिक्तिकरणका बारेमा विज्ञापनहरूको स्थानान्तरण गरिन्छ। यही कारणले यो रूसी संघको मूल निवासीको लागि उपयोगी छ इन्टरनेटमा स्थानीय मासिक मिडिया हेर्न र निश्चित रूपमा तपाइँले मनपर्ने रिक्तिका अनुसार अनुसार केही प्रतिक्रियाहरू पठाउनुहोस्।
अर्को धेरै रोचक र एकै समयमा प्रभावकारी विकल्प विज्ञापनहरू सिधै कम्पनीको आधिकारिक स्रोतहरूमा जाँच गर्ने छ कि त्यहाँ जागिर खोज्ने इच्छा छ। यसैले, यो आवश्यक छ कि यस्तो ढाँचामा आफ्नो पुन: सुरुवात वितरण गर्नुहोस्, र फेरि पुनः खोज्नुको लागि यदि एक निश्चित कम्पनीमा पुगेको छ र यस समयमा एक निश्चित रिक्त स्थानको संभावना के हो।
अन्तमा, यो ध्यान दिनुपर्छ कि विदेशको लागि खोजी खोजी एक लामो र जटिल प्रक्रिया हो। किन? विदेशी नागरिकलाई रोजगार गर्न आयरिश नियोक्ताले श्रम मन्त्रालयबाट अनुमति पाउनु पर्छ वा यस व्यक्तिबाट (ती सुविधाहरू र ती किसिमहरू अघिल्लो अध्यायमा छलफल गरिएका छन्)। यो अनुमति नियोक्ताको रोजगारी कम्पनीको सेन्सर विभागमा जारी गरिएको छ, जुन संयोगमा, राज्यको कर्तव्यहरूको भुक्तानीमा व्यस्त छ। त्यसोभए, यो गम्भीर कदम चाल्न र एक विदेशी कर्मचारी भाडामा लिनु, भविष्यको कर्मचारीको निरन्तर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हुनु पर्छ, किनभने अन्य युरोपियन युनिभर्सिटी र आयरल्यान्डका नागरिकहरूले यो वा रिक्तताका लागी आवेदन गर्न सक्छन्।
यो जान्न आवश्यक छ कि आयरल्याण्डमा परीक्षण अवधि छ महिना छ। साथै, एक विदेशी विशेषज्ञले एक विशेष संरचनाको आयरिश कर्मचारीको रूपमा त्यही वेतन प्राप्त गर्दछ। नगद एक बैंक कार्डमा हस्तान्तरण गरिएको छ, प्रीमियम वार्षिक मजदूरी को सात देखि दस प्रतिशत फरक हुन्छ।
एक तिर्ने काम कसरी पाउन
लार्सन Holz लिमिटेड: कम्पनी "लार्सन Holz" को कर्मचारीहरु को समीक्षा
श्रम सुरक्षा विशेषज्ञ: एक काम विवरण। सिसिले latvia विशेषज्ञ: मुख्य जिम्मेवारी
कामबाट बधाई कसरी काम गर्ने समय लिनु हुन्छ? अनुपस्थितिको लागि व्याख्या
शिक्षण विधि मा कार्य र जिम्मेवारी। एक मेथोडिस्ट के गर्छ? काम विवरण मेथोडिस्ट
के संसारमा सबै भन्दा ठूलो शहर हो। पहिलो पाँच।
ओवन भित्र पनी मेकेरेल पकाउने कसरी: कदम पछाडि नुहाउनुहोस्
सिलिकॉन एक्सप्लेन्डर: आधारभूत प्रकार
रेटिना detachment: लक्षण, कारण, उपचार
Drizzt Do'Urden - रबर्ट Salvatore पुस्तकहरूको मुख्य पात्र